တရုတ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် လူဟန်၏ အချစ်ရေးသတင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများတွင် ပွက်လောရိုက် - Yangon Media Group
တရုတ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် လူဟန်၏ အချစ်ရေးသတင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများတွင် ပွက်လောရိုက်
ပေကျင်း၊ အောက်တိုဘာ ၉
နာမည်ကျော် လူငယ်သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော်လူဟန်သည် ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ချစ်သူမိန်းကလေးကို လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာအပေါ်တွင် ပရိသတ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးနောက် အဆမတန်ကြီးမားသော လိုင်းကျပ်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူသုံးများသည့် Weibo တွင် ချစ်သူမိန်းကလေးဖြစ်သည့် သရုပ်ဆောင် ဂွမ်ရှောင်တုန်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Weibo လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ၏ ဆာဗာမှာလိုင်း ကျပ်မှုကြောင့် ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ လိုင်းကျပ်တည်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၃ နာရီအကြာ၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် လူဟန်၏ ပို့စ်ကို Like ပြုလုပ်သူ ၄ ဒသမ ၇၂ သန်းရှိခဲ့ပြီး မှတ်ချက်ပေးသူ ၂ ဒသမ ၂၅ သန်းရှိခဲ့သည်။
ပရိသတ်အများစုမှာ အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှလုံးထိခိုက် ကြေကွဲသည့်အကြောင်း ဖော်ပြရေးသားခဲ့ကြပြီး ၎င်း၏ အကောင့်ကိုလည်း Unfollow ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လူဟန်၏ Weibo အကောင့် Follower မှာ ၁ ဒသမ ၄၅ သန်းတိုးလာခဲ့သည်။ ပရိသတ်အချို့မှာလည်း အဆိုပါသတင်းကို လက်ခံခဲ့ကြခြင်းမရှိဘဲ မကြာမီရုံတင်ပြသတော့မည့် ချစ်သူနှစ်ဦး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ပရိုမိုးရှင်း ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လူဟန်၏ မန်နေဂျာဖြစ်သူက ပရိုမိုးရှင်း အဆန်းထွင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အဆိုပါသတင်းကို အတည်ပြုကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြုပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီများ အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်လျှင် ဝန်ဆောင်ခပေးရန် မလို၊ ဌာနသို့ လာရောက် ဆောင်ရွက်ပါ?
တရားမျှတမှု ဖော်ဆောင်ရန် နှောင့်နှေးခြင်းသည် တရားမျှတမှုကို ငြင်းဆိုခြင်းဆိုသည့် ဆိုရိုးစက?
ကနီရှိ စာသင်ဝိုင်းတစ်ခုတွင် ဆယ်တန်းအောင် ဂုဏ်ပြုပွဲမှကျွေးသော ထမင်းဟင်းများ စားပြီးနောက်
သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်အသစ်တွင် တရုတ်မင်းသမီး ဂေါင်းလီ ပါဝင်မည်